fanafohezan-teny : UBT
Créé : 1745
Aza adino ny discuss Braunschweig University of Technology
Tongasoa eto amin'ny Technische Universität Braunschweig!
Ity fizarana ity dia ahitana ny maro be ny vaovao momba ny tenantsika: Ny fandrosoana ara-tantara ny TU Braunschweig, ny eo izao, ary ny stratejika ho avy drafitra ho an'ny fivoarana.
Amin'ny toe-javatra sasany, dia mety ho isika no mila miresaka anao fanazavana izay misy amin'ny teny alemà ihany. Miala tsiny izahay zavatra hafa mety hanakana mety hahatonga anao.
TU Braunschweig manome ny mpianatra tsara ny fanabeazana sy ny fanofanana amin'ny fahaizana malefaka - ary dia toy izany no asa miavaka fahafahana, indrindra fa ao amin'ny orinasa, ny siansa sy amin'ny fanabeazana orinasa.
Voalohany ny kilasy fampianarana sy fianarana tsara tarehy toe-piainana ireo singa manan-danja ao amin'ny TU Braunschweig sary.
Ny antokony tarihin'ny ny fikarohana sy hanome ny sakany, in-lalina fototra, ary koa ny fanatitra samy hafa mety ho an'ny tsirairay specialization. Koa izahay amin'ny alalan'ny famindrana ny fahalalana manao fikarohana-mirona bebe kokoa ny fanabeazana.
Miezaka hatrany isika hampandrosoana ny hatsaran'ny ny fampianarantsika ny alalan 'ny fandraisana anjara ny mpianatra, ary entaninay ireo zava-baovao ao amin'ny fampianarana.
Mba hanaovana izany, dia miasa toy ny ekipa sy ny maro tetikasa fiaraha-miasa na ao TU Braunschweig ary koa amin'ny oniversite hafa sy ny fikarohana andrim-panjakana (na firenena sy ny iraisam-pirenena), sekoly sy ny orinasa.
Mampitombo manokana antokon'ny fianarana eo amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpiara-miasa.
Isika hampiroboroboana ny fiaraha-miasa ny afovoany sy fitongilànana toerana mba hanatsarana hatrany ny kalitaon'ny ny fianarana sy ny fampianarana izay atolotsika sy mba hanamora ny fianarana dingana. Izahay manolotra tolotra sy ny torohevitra ho an'ny mpianatra sy ny olona liana amin'ny fianarana amin'ny TU Braunschweig.
Carl Friedrich Gauß School – Faculty for Mathematics, Informatika, Fitantanana orinasa, toekarena, ary Siansa Sosialy
Architecture, Injeniera sivily, and Environmental Sciences
Taozava-baventy mekanika (Aeronautical, Automotive, Industrial, Energy & Process)
herinaratra Engineering, Teknolojian'ny fampahalalana, Fizìka
Ianao ve mila discuss Braunschweig University of Technology ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: Braunschweig University of Technology ofisialy Facebook